I-TradingView Desktop: Ungalufaka kanjani lolu hlelo lokusebenza lwe-DeFi ku-GNU / Linux? | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 13/08/2021 06:00 | Aplicaciones, eziningana
Njengoba sibonile, ikakhulukazi kulo nyaka odlule kuwebhu, ukuthandwa kanye ne Ukuthuthukiswa kweSoftware ukuze I-GNU / Linux i-del Ububanzi beDeFi. Masikukhumbule lokho Defi o Ezezimali ezisatshalalisiwe Bayi- ukuthambekela kwezobuchwepheshe umthombo ovulekile, okwenzeka ezungeze ubuchwepheshe bamuva be-blockchain emhlabeni wezezimali.
Lo mkhuba uya ngokuqina nsuku zonke ngenxa ye-boom in Criptomonedas. Futhi, ngenxa yesidingo sezinhlelo zokukhokha zedijithali ezinokwethenjelwa, ezisheshayo, eziphephile nezizimele nokuthengiselana kwezezimali. Futhi ngenxa yalesi sizathu, namuhla sizohlola olunye uhlelo lokusebenza oluthokozisayo kule ndawo olubizwa "I-TradingView Desktop". Okufanele i- qapha isimo esiku-inthanethi sama-cryptocurrensets, phakathi kwezinye izinto.
Futhi njengoba, lokhu Iphrojekthi yohlelo lokusebenza lwe-DeFi Ifana kakhulu nezinye ezifanayo esizihlolile futhi sabelana ngazo ngaphambili, sizoshiya ngokushesha izixhumanisi zalokho okushiwo okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene nabo. Ukuze, uma kunesidingo, zifundeke kalula ekugcineni kokufunda kwale ncwadi:
"ICryptowatch Desktop uhlelo lokusebenza lwedeskithophu enamapulatifomu amaningi athuthukiswe ukuvumela abasebenzisi bayo, ngokwendawo kusuka kumakhompyutha abo, ukuthi bazakhele amadeshibhodi abo emakethe, ukuze bakwazi ukusebenza ngesikhathi sangempela futhi babheke imakethe ye-crypto yomhlaba wonke enentshisekelo." Ideskithophu ye-Cryptowatch: Isicelo sokuqapha imakethe ye-crypto yomhlaba
1 I-TradingView Desktop: Uhlelo lokusebenza lwabathengisi bemakethe ye-crypto
1.1 Yini iwebhusayithi ye-TradingView?
1.2 Yini uhlelo lokusebenza lweDesktopView Desktop?
1.3.1 Izithombe zesikrini
I-TradingView Desktop: Uhlelo lokusebenza lwabathengisi bemakethe ye-crypto
Yini iwebhusayithi ye-TradingView?
Ngokusho kwakhe Iwebhusayithi esemthethweni, ichazwa ngale ndlela elandelayo:
"Siyinethiwekhi yokuxhumana nabantu enabahwebi nabatshalizimali abayizigidi ezingama-30 abasebenzisa amashadi namathuluzi wokuhlaziya amahle kakhulu emhlabeni ukuthola amathuba ezimakethe zomhlaba. Ungaphuthelwa yithuba lokulandela amafa wakho owathandayo, thola imibono yokuhweba, uxoxe nabanye, ubone izitayela futhi uhwebe ngqo kumashadi wethu." Mayelana ne-TradingView
Yini uhlelo lokusebenza lweDesktopView Desktop?
Ngokusho kwe- Isigaba esisemthethweni se-TradingView Desktop, kusho ukuthi isicelo sichazwa ngale ndlela elandelayo:
"Uhlelo lokusebenza lwedeskithophu olukuvumela ukuthi uphinde usebenzise ulwazi olufanayo oluhle lomsebenzisi wewebhusayithi ye-TradingView ngqo kusuka kudeskithophu yamakhompyutha. Futhi kwezinye izimo, ngisho nokuzwa amandla amakhulu, isivinini nokuguquguquka, konke kune-UX efanayo eyaziwayo. Konke ngenhloso yokunikeza endaweni eyodwa isikhala esihle sokuqapha nokuhlaziya izimakethe ezihlobene nama-cryptocurrensets."
Noma, noma yini I-GNU / Linux Distro esekela izinhlelo zokusebenza ngokususelwa ku- snap. Yiphi ukuphela kwefomethi yephakheji ye-Linux etholakalayo njengamanje "I-TradingView Desktop".
Ngaphezu kwalokho, futhi kusukela lokusebenza "I-TradingView Desktop" Kususelwa ku Ifomethi ye-Snap kuyaqondakala ukuthi i- I-GNU / Linux Distro Kufanele usebenzise I-Systemd. Ngakho-ke, sizosebenzisa I-MX Linux waqala kusuka Uhlelo lwe-GRUB boot ngenketho yakho nge "Qala nge-Systemd". Esikhundleni senketho yayo ezenzakalelayo, engekho I-Systemd noma kunalokho nge I-Systemd-shim.
Okwakho ukulanda, ukufaka nokusebenzisa, futhi ucabanga ukuthi awunayo ifomethi yephakheji ye-Snap efakiwe, lokhu kungaba yi imiyalo yokuyala ukwenza ku-terminal (console) yohlelo lwakho lokusebenza:
Ngemuva kwalokhu, kusala kuphela ukugijima "I-TradingView Desktop" kusukela imenyu yezinhlelo zokusebenza we I-GNU / Linux Distro esetshenzisiwe.
Note: Ukuthola eminye imininingwane ngalezi zinyathelo kusinyathelo ngasinye I-GNU / Linux Distro ungahlola okulandelayo isixhumanisikanti, noma ngokususelwa ku-Debian Distros, ungahlola ngqo okulandelayo isixhumanisi.
Note: Lokhu uhlelo lokusebenza lwamahhala alukhululekile futhi aluvulekile, kepha ingaba wusizo kakhulu kubathandi be Criptomonedas, kuma-Operating Systems ayo amahhala futhi avulekile.
Ngokufingqa, "I-TradingView Desktop" iyathakazelisa futhi iyasebenziseka Isicelo sedeskithophu (i-GUI) yenzelwe labo basebenzisi abanesifiso se- Umhlaba weDeFi. Futhi ikakhulukazi kulabo usuku nosuku umhwebi (bayathengisa) ehlukile Criptomonedas ngebhizinisi ngalinye futhi udinga ukuqapha imakethe ye-crypto yomhlaba ngesikhathi sangempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-TradingView Desktop: Ungalufaka kanjani lolu hlelo lokusebenza lwe-DeFi ku-GNU / Linux?
I-athikili enhle kakhulu kulabo abathembele kwisoftware ukuguqula imali yamazwe abo
Sanibonani, Paul Cormier. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Yebo, impela uhlelo lokusebenza oluhle kulabo abathanda ama-Cryptocurrensets futhi abasebenzisa i-GNU / Linux. Asethembe ukuthi i-TradingView Desktop ne-CryptoWatch Desktop zikhululeke ngokuphelele noma zivuleke ngokuphelele noma, ngokwehluleka lokho, kuzophuma ezinye ezikhululekile ezingama-100 noma ezivulelwe ukuzuzisa bonke.